जाडोमा तुलसी सेवन कति लाभदायक ? – www.neumine.com
Source: indiatimes Published on4minutes ago
जाडोमा तुलसी सेवन कति लाभदायक ?
तुलसी औषधिय गुणले भरिपूर्ण बनस्पति । धेरैको घर आँगनमा त तुलसी रोपिएकै हुन्छ । आर्युवेदमा यसको खास महत्व छ । त्यसैले तुलसीलाई पूज्ने गर्छौ, जो मानव स्वास्थ्यका लागि अति लाभदायक मानिन्छ ।
तुलसी जाडो याममा निकै उपयोगी हुन्छ । किनभने जाडोमा रुँघा, ज्वरो, निमोनिया, ब्रोन्काइटिस, गलाको समस्या, फोक्सोको समस्या हुनेगर्छ । यस्तो अवस्थामा तुलसीले औषधीको काम गर्छ ।
बिहान खाली पेटमा चार-पाँच तुलसीको पात सेवन गर्नुपर्छ । यो पातलाई दुई चम्चा पानीसँग वा पिसेर सेवन गर्न सकिन्छ । त्यसो त चार-पाँच वटा पात चपाए पनि फाइदा गर्छ ।